အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ရွာငံမြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်များ ၊မြို့မိမြို့ဖများနှင့်တွေ့ဆုံ | NLD
Home News အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ရွာငံမြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်များ ၊မြို့မိမြို့ဖများနှင့်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၊ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းထွန်းဟိန်နှင့် ဦးအောင်ကြည်ညွှန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်ဥက္ကဌဦးဇော်မင်းလတ်၊အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်စိန်တို့မှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရွာငံမြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့မိမြို့ဖများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ပါတီလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သတ်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထိုနောက်အမှတ်တရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကာ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်ကြီးများမှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရွာငံရုံး၏ ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းမှာ အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနွင့္ ရြာငံၿမိဳ႔နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ၊ျမိဳ႔မိၿမိဳ႔ဖမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု
၁၅ . ၆ . ၂၀၂၀
အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ၊ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္နွင့္ ‌ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းလတ္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေမာင္ေမာင္စိန္တို႔မွ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ရြာငံၿမိဳ႔နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔မိၿမိဳ႔ဖမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ ရင္းနီွးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္
ထိုေနာက္အမွတ္တရမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုရိုက္ကာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ၾကီးမ်ားမွ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရြာငံရံုး၏ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းမွာ အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကပါသည္။